Hotohizan’ilay Malayziana Mpanao Sariitatra ny Ady amin’ny Fihoara-pahefana na dia Voampanga ho Mpampisara-Bazana aza izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2015 23:01 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , English, Italiano, Swahili, Español, বাংলা, Ελληνικά, English
Miatrika vesa-piampangana maro ilay Malayziana iray mpanao sariitatra ary nianiana ny hampiasa hatrany ny peniny hitsikerana ny kolikolin'ny governemanta, ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ary ny fihoaram-pahefana.
Zulkiflee Sm Anwar Ulhaque, malaza kokoa amin'ny anarana Zunar ao Malaysia, dia mpanao sariitatra ara-politika izay efa indroa nosamborina noho ny filazana ho fanitsakitsahana ny lalàna fampisaraham-bazana, lalàna efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Zunar, izay nosamborina tamin'ny fiandohan'ity volana ity, dia voampanga ho in-tsivy nampisara-bazana. Raha hita izy fa meloka dia mety higadra hatramin'ny 43 taona farafahabeny. Mbola afaka vonjimaika izy amin'izao fotoana izao.
Raha nanontaniana momba ny teknikany, nanazava iZunar fa zava-dehibe ho an'ny artista iray ny ‘manam-pijoroana‘ sy mitondra ny hafatra mety ho an'ny mpamaky :
Ity kisarisary ity no nampiasaina ho fototra anenjehana an'i Zunar ho mpampisara-bazana. Najib Razak no praiminisitra amin'izao fotoana izao nampangain'ny mpitarika ny fanoherana Anwar Ibrahim migadra ho mampiasa ny efi-pitsarana ho fampanginana ireo mpitsikera. Anwar, izay mihinana ny famonjana dimy taona noho ny fanaovana sodomia, milaza fa antony ara-politika no anenjehana azy.
Niaro an'i Zunar ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Suaram ary namelively ny governemanta noho ny fisamborany ireo mpitsikera azy:
Ireto ambany ireto ny sasantsasany amin'ny sariitatr'i Zunar ao amin'ny Twitter. Efa mpitsikera ny hetra vaovao (GST) napetraky ny governemanta sy ny hitany ho fitohizan'ny kolikoly avo lenta any amin'ny sehatra avo any. Nasehony ho tahaka ny ahoana ny handratran'ny GST ny rakyat (olon-tsotra):
Sariitatr'i Zunar momba ny fampandaniana ny lalàna vaovaon'ny fampisaraham-bazana izay heverin'ny mpikatroka fa hikiky tsikelikely ny feo manivaka antserasera :